Munamato webhizinesi. ? Basa uye Kuwanda | Mutsvene Judha Thaddeus
Munamato webhizinesi nyika Zvemweya ichokwadi chatisingakwanise kupunyuka kana kufuratira, ndosaka patinotanga mutsva mutsva zvakanaka kuti uite a munamato webhizinesi Tava kuda kutanga
Kuve bhizinesi rakaropafadzwa, zvekuti masimba akanaka anoyerera panguva dzese. Tinogona kubvunza kubudirira uye kuti munhu wese anopinda mubhizinesi redu anonzwa rugare uye kugadzikana.
Namatira bhizinesi hazvireve hazvo kuti ivepo kana iri kutanga, tinogona kunamatira mabhizinesi atova nenguva yekufamba.
Chinhu chakakosha kumurumbidza muzita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene uye tenda kuti munamato wataita une simba.
Panguva idzodzo uko bhizinesi risiri redu asi iri shamwari kana hama, tinogonamatira kuti iro bhizinesi riropafadzwe uye ribudirire kwazvo.
1 Munamato webhizinesi Chii icho?
1.1 Munamato wekuropafadza bhizinesi
1.2 Zvebasa uye rakawanda bhizinesi
1.3 Munamato kuna St. Jude Thaddeus yebhizinesi
Munamato webhizinesi Chii icho?
Munamato webhizinesi wakakosha nekuti kuburikidza naro tinogona kuwana nzira iyo bhizinesi inofanirwa kutora, yeuka kuti nguva zhinji isu tinoda kuita chinhu chimwe apo isu chaizvo tichifanira kuita chimwe chinhu chakasiyana uye ichi ndipo apo kuburikidza nemunamato tinogona kugamuchira kero yatinoda kuita sarudzo dzakanaka uye kuenda nenzira kwayo.
Isu takakwaniswa pamweya kuti tikwanise kutaurirana naMwari uye nevatsvene, isu hatigone kumirira kuti mumwe auye kuzokomborera izvo zviri zvedu, hongu tinogona kuvimba neshamwari kana nhengo yemhuri asi basa remweya nderoga, saka tinofanirwa kudzidza kuvimba Munamato wedu pachedu
Hatigone kukumbira budiriro yemari kana isu tisingatendi kuti zvinokwanisika kuzviita, zvakanyanya kudarika kudzidza kunyengetera.
Tinofanira kuva nekutenda kuti munamato watinoita unosvika kudenga uye kuti unozadzisa chinangwa chatinokumbira.
Mirira mhinduro kubva kwedu minamato inogona kuva chinhu chakaomesesa asi Kana isu tichivimba, zvechokwadi zvinotora izvo zvatinokumbira zvakanyanya kuti tisvike.
Munamato wekuropafadza bhizinesi
Vanodikanwa Ishe, ndinokumbira rubatsiro rwenyu kutanga bhizinesi rangu. Uri shamwari yangu yakasimba uye mumwe wangu wepamoyo.
Ndokumbirawo mundibatanidze mune iyi nyowani nyowani kuti ndibudirire. Kwandiri, mhuri yangu uye vatengi vandichashandira. Ndipei masimba ako ekutonga kwakanaka.
Huchenjeri hwako uye kutungamira kuti bhizinesi rangu ribudirire uye uite chinhu chakakodzera. Zvese isu muzita renyu rekudenga.
Kuwanda, kusanzwika, kutungamira kuita sarudzo, mazano matsva uye zvimwe zvakawanda zvikumbiro zvatingagona kuisa pamberi paMwari uyo anogona kuita zvese kutipa rubatsiro rwake rwetsitsi.
Hapana anoziva zviri nani kupfuura iwe izvo zvingangomuka mubhizinesi rako, taura naMwari uye wopa yega yega kwaari.
Rangarira kuti kunyengetera kutaura kuna Mwari, wobva wataura naye uye usakanganwa kumupa nguva yekupindura, kufambisa zvidimbu mukuda kwako.
Hazvisi zvinhu zvese zvichaitika sezvatinoda kuti zviitwe, asi kana isu tichivimba naIshe, zvine chokwadi kuti chero zvinoitika ndezvekuropafadzwa kwedu.
Zvebasa uye rakawanda bhizinesi
Vanodikanwa Ishe, ndinokumbira rubatsiro rwenyu kutanga bhizinesi rangu. Iwe uri shamwari yangu yakasimba uye mumwe wangu wepamoyo. Ndokumbirawo mundibatanidze mune iyi nyowani nyowani kuti ndibudirire.
Kwandiri, mhuri yangu uye vatengi vandichashandira. Ndipei masimba ako ekutonga kwakanaka.
Vanhu vazhinji tanga bhizinesi idzva uye ivo vanoda kunakirwa nezvakawanda vasingazive kuti zvinouya zvishoma nezvishoma patiri kushanda.
Naizvozvo kukumbira zvakawanda pasina kushanda kuri kukumbira pasina. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti kutenda pasina basa kwakafa, saka isu tinofanirwa kukumbira Mwari kuti atipe zvakawanda, asi zvakare kuti zvishandire kuti tisvike pazviri.
Tinofanira kudzidza kugadzira mitsara nenzira kwayo, hatikwanise kukumbira chimwe chinhu chatisinganyatsoda, tinokumbira zvinhu zvakakosha asi zvisina hupfumi.
Semuenzaniso huchenjeri, nahwo tinogona kuwana hwakawanda.
Munamato kuna St. Jude Thaddeus yebhizinesi
Mutsvene Judha Thaddeus,
Panguva ino tinokumbira kuti mureverere pamberi paBaba vedu Vokudenga,
Nekubudirira kwebhizimusi redu,
Kunobva basa revakawanda uye chikafu chemhuri dzedu,
Vhara makona ese emaropafadzo,
Uye kune vese vanoshanda mariri,
Kuti basa redu riropafadzwe neWekumusoro-soro,
Uye iva anofadza mumeso ake.
Usatendera mukati meiyi nzvimbo yebasa,
Chiokomuhomwe kana michero yeimwe bhizinesi rakaipa inogamuchirwa,
Dai zvese zvatinoita zvive zvine chiremera uye zvinoremekedzwa,
Kubhadharisa zvakakwana uye nerudo kushandira hama dzedu,
Tibetsere isu kuzadzisa zvinangwa zvakagadzirirwa bhizinesi redu nekusimudzira kutengeserana
Tinokukumbirisa kuti usimbise matiri rudo rwaMwari,
Kune vese vanoshanda munzvimbo ino,
Uye ngative rudo rwaMwari nemhuri dzedu,
Ivo vanotibatsira kuita basa rakanaka,
Komborera pfungwa dzako, zviito zvedu uye mazwi edu,
Tinokukumbira muzita reMuponesi Wedu, Ameni.
Izwi raMwari rinotidzidzisa kuti isu tinofanirwa kuve nekubudirira sekunaka mweya yedu uye kuti tinotsvaga humambo hwaMwari uye kururamisira kwake uye zvimwe zvese zvinowedzerwa, saka tinotarisa simba redu rese mukudyisa mweya yedu, nenzira iyi tino vimbisa kuti budiriro inouya munzira nekuti Mwari anovimbisa.
Ngativimbei nemunamato uye nekushandira kuti izvo zvatiri kukumbira zviwane kwatiri nekukurumidza.
Iwe unogona here kunamata kudarika munamato une simba webasa rebhizinesi uye nekuwanda kuna Mwari naSt. Julius Thaddeus?
Unogona kunyengetera hongu.
Chinhu chakakosha ndechekuti unamate uine kutenda kwakawanda mumoyo mako.
Kana iwe uine kutenda uye kana uchitenda kuti zvese zvinokuvandudza iwe unogona kunamata pasina dambudziko.
Rangarira kungotenda kuti zvese zvichafamba zvakanaka!